लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी एस्टोनियन कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
ढिलो होस् वा चाँडो, सबै मानिसको जीवनमा समस्याहरू आउँछन्‌। सुखी र सम्पन्न जीवन बिताइरहेका मानिसहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन्‌।
“वेग कुदाइले दौड जित्नसक्तैन, औ शक्तिले लडाइँ जित्नसक्तैन। भोजन बुद्धिमानको निम्ति, धन-सम्पत्ति समझदारको निम्ति, सफलता निपुण मानिसको निम्ति हुँदैन। समय र अवसरले नै सबैलाई अधीन गरेको हुन्छ।”—उपदेशक ९:११.
त्यसकारण तपाईंको जीवनमा पनि समस्याहरू त अवश्य आउँछन्‌। तर समस्याहरू आउँदा तपाईं कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ? उदाहरणको लागि:
प्राकृतिक प्रकोपमा तपाईंले आफ्नो सारा सरसम्पत्ति गुमाउनुपऱ्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?
तपाईंलाई कहिल्यै निको नहुने रोग लाग्यो भने नि?
तपाईंले माया गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भयो भने?
बाइबलले समस्याहरू आउँदा सहन मदत गर्नुका साथै भविष्यको लागि साँचो आशा पनि दिन्छ भनी यस पत्रिकाका प्रकाशक यहोवाका साक्षीहरू विश्वास गर्छन्‌। (रोमी १५:४) तिनीहरूले यस्तो विश्वास गर्नुको कारण के हो? तीनवटा अनुभव विचार गर्नुहोस्। (g14-E 07)